När är det dags att ta sig till förlossningen? - somaliska - 1177
När är det dags att ta sig till förlossningen? - somaliska
Gormee la soo aadi qeybta foosha?
När är det dags att ta sig till förlossningen? - somaliskaThe content concerns Jönköpings län
Foosha qeybteeda koowad caadiyan qofka gurigiisa buu joogi. Marka xanuunka foosha soo xoog bato markas baa laga yaabaa inaa soo aadikartid qeybta foosha. Laakin sidee baa lagu oggaan in la gaaray wakhtiga? Meeshan adiga waxaa ka heli tilmaamo.
Adiga waxaa xita soo wicikarta qeybta foosha iyo la tashankarta ummuliso. Ummulisada adiga weey ku dageysan iyo xaalada markas taagan bey ka tusaale qaadan iyo adiga ku siin talo oo haddii la gaaray wakhtigii aad soo aadi laheed ama ey kuu dhaanto inaa guriga sii joogtid xooga kale.
Inta ugu badan qeybta foosha waxey doonaayan in adiga soo wacdid koow haddii xita aad is hubtid in wakhtigii la gaaray. Ayaga markas weey kuu sii diyargaroobaayan. Qeybta foosha aad la xiirireysid waxaa kuu sheeki ummulisada oo joogto qeybta dumarka uurka leh.
Adiga markasto waxaa soo wicikarta telefoon lambarka 1177 haddii aadan ogeyn qeybta foosha aad la soo xiriireysid.
Adiga xaaladaada ka cabir qaado - Utgå från dig själv
Waxa kugu muhiimsan waa in adiga canuga dhali ka cabir qaadatid xaaladaada iyo sidaa dareemeysid. Adiga markasto soo aad sidii koontarool u martid aad dareemeysid in dhib badan kugu hayso iyo adiga kugu adkaato inaa nasatid. Haddii xaalada ey fiicantahay adiga waxaa ku noqon gurigaada iyo ummulisada qiimeyso in wakhtigii foosha wali la gaarin.
Waxyaabaha saameynta ku yeelankaro haddii adiga soo aadeysid isbitaalka - Saker som påverkar när du bör åka in
Waxaa jiro dhowr wax oo saameyn ku yeelan karo haddii la gaaray wakhtigii aad soo aadi laheed isbitaalka:
ilaa inta yeer oo adiga foolan aad xanuunka dhareemeysid iyo sida aad u dareemeysid xanuunyadas.
haddii biyaha kaa imaaden.
haddii canug horey usoo dhashay canug.
ilaa inta uu kuu jiro qeyba foosha.
haddii adiga shaqaalaha daryeelka horey talo qaas kuu siiyen. Tusaale ahan haddii adiga ku haayo cudur joogto.
Waxaa jiro dhowr xaalado oo adiga u baahantahay inaa soo aadid qeybta foosha. Tusaale ahaan haddii adiga dhiig kaa socdo ama caloosa kaa haayo xanuun aanan kaa fuqeyn.
Inta baa ka akhrisankarta marxaladaha foosha.
Xannun baa laga go’aan qaadan - Värkarna kan avgöra
Ilaa heerka xanuunka yahay baa laga cabir qaadan marka la go’aamin haddii aad soo aadeysid qeybta foosha. Waxaa la jooga wakhtigii aad soo aadi laheed haddii xaaladahaan midkood ama dhowr kamid ah ey kugu haboonyahiin:
Xanuunka wuxuu ku hayn ilaa hal minid. Waa xanuun muuqdo oo leh bilaaw iyo dhammad. Waa dareemi markuu bilaaban iyo markuu ku daayn.
Xanuunka si joogto buu kuugu soo noqnoqan. Wakhti isleh buu kuugu soo noqnoqan. Adiga waxaa dareemi saddex ilaa afar xanuun 10 minid gudaheeda. Taasna micnaheeda tahay in xanuunka u dhaxeeyo labo ilaa saddex minid.
Biyaha kaa soo baxen - Vattnet går
Caadiyan adiga waxaa noogu imaan qeybta foosha koontarool haddii biyaha kaa soo baxan. Qaasatan haddii biyaha midab wasaqeynsan ey leeyahiin iyo uraayan. Markas adiga waa inaa toos usoo aadid qeybta foosha.
Haddii xita xanuunka eysan bilaaban adiga waxaa u baahantahay inaa soo aadid qeybta foosha haddii biyaha kaa soo baxan. Markas kadib gurigaada waa ku noqonkarta haddii xaalada ey fiicantahay marka lagu koontaroolo kadib. Foosha waa lagaa caawin iney bilaabato haddii xanuunka foosha sidii la doonaayay eysan kuugu bilaaban dhowr maalmood gudahooda laga bilaabo markii biyaha kaa soo baxeen.
Horey canug ma usoo dhashay? - Har du fött barn tidigare?
Caadiyan foosha wakhti dheer ma qaadaneyso haddii canug horey usoo dhashay. Qaas ahaan haddii foolahii horey dhaqso ku dhammaaden. Markas waxaa wanaagsan in wakhti hore soo aadid qeybta foosha.
Ilaa imisa baa adiga soo safartay? - Hur långt har du att åka?
Adiga waxaa u baahantahay inaa soo aadid qeybta foosha wakhti hore haddii meel aad u dheer kuu jirto.
Gormee la joogi? - När får man stanna?
Marka aad imaatid qeybta foosha bey ummulisada baari ilaa inta afka makaanka furmay. Dadka badanaa weey joogan haddii uu furmay in ka badan saddex ilaa afar sentimitir.
Waxaa suurtagal ah inaa adiga u baahantahay inaa u gurigaada dib ugu noqotid haddii ummulisada qiimeyso in wakhti ka dhimantahay dhalashada canuga. Wax lala yaabo ma’ahan, qofka inuu niyad jab dareemo.
Caroline Lilliecreutz, dhakhtarka haweenka iyo dhalmada, Universitetssjukhuset, Linköping